Safari မှ extensions များကိုဖယ်ရှားနည်း ငါက Mac ပါ
Safari မှ extensions များကိုဖယ်ရှားနည်း
Browser Extensions များကကျွန်ုပ်တို့အားမူလမရရှိနိုင်သောအပိုလုပ်ဆောင်မှုများကိုခွင့်ပြုသည်။ Chrome သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသော extension များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် ၎င်း၏စတိုးမှတစ်ဆင့် Firefox နှင့် Safari တို့ကနောက်မှကျွန်တော်တို့ကိုအရင်လောက်များများစားစားမပေးနိုင်ကြဘူး။ နောက်ဆုံးအားဖြင့် Microsoft Edge တွင်တိုးချဲ့မှုများကိုအသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သောနောက်ဆုံးဘရောက်ဇာ၊ ၀ င်းဒိုး ၁၀ နှင့်စျေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာသည့်လတ်တလောလအနည်းငယ်အထိသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတိုးချဲ့တပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းမပြုဘဲသုံးစွဲသူများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည် Browser Quota နှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများအရ Chrome ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
Safari တွင် Apple ဝက်ဘ်ဆိုက်မှသော်လည်းကောင်း၊ GiHub မှတစ်ဆင့်တိုက်ရိုက် install လုပ်နိုင်သည့် extensions အမျိုးမျိုးကိုရှာတွေ့နိုင်သည်။ developer များစွာသည်၎င်းတို့၏ပရောဂျက်များကိုသုံးစွဲသူများနှင့်ရပ်ရွာလူထုနှင့်မျှဝေနိုင်စေရန်၎င်းပရောဂျက်များကိုတင်ကြသည်။ ဤ extension များသည် Apple filter ကိုမသွားသောအခါ၊ ၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးရည်ရွယ်အဖြစ်မဟုတ်ပါနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာပြissuesနာများဖြစ်ပေါ်စေသည် browser ထဲမှာ။ ဤကိစ္စများတွင်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်သည်မှာ Safari ကိုပြproblemsနာမရှိဘဲပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
Mac ပေါ်ရှိ Safari မှ extensions များကိုဖယ်ရှားပါ
ပထမဆုံး Safari browser ကိုဖွင့်ပါမယ်။
ပြီးရင်နောက်ကိုသွားမယ် ဦးစားပေး ထိပ်ဘားရှိ Safari menu တွင်တည်ရှိသည်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် tab ကိုသွားပါ extension များ.
Extensions tab တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖယ်ရှားလိုသော extension ကိုရွေးချယ်ရမည်။
လက်ျာဘက်၌, extension ၏အသေးစိတ်တစ် ဦး နှင့်အတူပေါ်လာပါလိမ့်မယ် uninstall လုပ်ဖို့ button ကို.
ကျနော်တို့အဲဒီခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင် system ကကျွန်တော်တို့လိုချင်လားမေးရင်ပြတင်းပေါက်တစ်ခုပြလိမ့်မယ် extension ကိုဖယ်ရှားရေးအတည်ပြုပါ.
ကျနော်တို့ဖျက်ခြင်းကိုအတည်ပြုကြပြီးတာနဲ့ဒီ Safari မှတဆင့်မရတော့ပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » Safari မှ extensions များကိုဖယ်ရှားနည်း
extensions တပ်ဆင်မှုကိုကာကွယ်ရန် mobileconfig ပရိုဖိုင်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း
မျှော်လင့်ထားသည့် AirPods သည်ယခုလ ၁၇ ရက်နေ့တွင်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်
Sudio Vasa BLA ကြိုးမဲ့နားကြပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သည်။